Na Louisville, ha chọrọ ịchọpụta ọgbụgba egbe nwere ike iji drones kwurula Akụrụngwa n'efu
Na Louisville, ha chọrọ ịchọpụta ọgbụgba egbe nwere ike iji drones kwurula
Obodo America nke Louisville ekwuputala nkwa ya iji kwadebe ndị agha ya na drones iji bulie arụmọrụ ha na ọnọdụ ụfọdụ dị egwu, ọkachasị na n'ihe banyere obodo a, ihe ezubere bụ na, maka iji drones, tupu ịmụrụ anya nke a ga-ekwe omume égbè, ndị a nwere ike rute mpaghara ahụ n’ọsọ dị elu ma dekọọ ihe na-eme.
Iji rụzuo ọrụ a, ndị ọchịchị Louisville na-anwale iji drones eji kamera na igwe okwu eme ihe. N'ihi nke a ngwaọrụ ga-enwe ike chọpụta kpọmkwem ebe a na-agbapụ egbe ma gaa n'ihu na-edekọ ebe ahụ, na-ebufe ihe niile na-eme n'oge dị n'aka na onye njikwa nke na-elekọta drone na, ya mere, ndị nche.
Iji drones nwere ike inye aka ịchekwa ọtụtụ ndụ na obodo American nke Louisville
Echiche dị ka nke a etinyeworị ule ahụ n'ụzọ dị oke egwu, ya mere ma nyekwa ihe ịga nke ọma ọ nweworo, na ndị isi obodo America a ma ama akpọtụrụla Federal Aviation Administration ka ha nye ha ikike dị mkpa ịmalite nnukwu ọrụ nakwa ka ha wee nwee ike nye akụrụngwa dị mkpa maka mmejuputa ya.
Dị ka ndị ọrụ dị iche iche gosipụtarala taa tinye ule a na ule, o doro anya na ha enwetala budata ibelata agbapụ n'obodo ebe ọ bụ na ụdị drones a na-eme, nke mbụ, na ndị uwe ojii nwere ike ịga mpaghara ụfọdụ ngwa ngwa karịa, nke abụọ, ndị omekome na-eche na a na-ele ha anya karịa, ihe na-enyere aka igbochi ha ịgbagbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Na Louisville, ha chọrọ ịchọpụta ọgbụgba egbe nwere ike iji drones kwurula
Howon Lee na-egosi anyị echiche ntụgharị 4D ya
Utu Pi akwadolarị Windows 10, opekata mpe na-akwadoghị